Ukuvuza, iDriphu, Ukuvuza ... Thenga | Martech Zone
Drip, Drip, Drip… Thenga
NgoMvulo, Septemba 6, 2010 NgoMvulo, Matshi 14, 2016 Douglas Karr
Akukho mntu ulinde i-tweet yakho elandelayo, uhlaziyo lwenqanaba okanye iposti yebhlog ukuze bathenge ngokulandelayo. Kusoloko kukho ithuba lokuba ungakhuthaza umntu ukuba athenge, kodwa akunakwenzeka ukuba uqikelele xa amathemba ekulungele ukuthenga kwakhona. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukubakhona xa ithemba lakho lisenzeka are ukulungele ukugqiba.
Baza kuba phi? Siyaqonda kwindlela yokuziphatha yangoku kwi-Intanethi ukuba uninzi lwethemba kwi-Intanethi liza kusebenzisa injini yokukhangela. Ngawaphi amagama aphambili abaya kuwakhangela? Ngaba baya kukhangela ekuhlaleni kuphando lwabo? Ngaba ukwiziphumo zeinjini yokukhangela apho bajonge khona? Ukuba bafuna isibonelelo ngaphakathi kwenethiwekhi yabo, ngaba ungumthombo othembekileyo okhoyo apho?
Ukubhloga ngumsebenzi omkhulu kwi-Intanethi kuba ikuvumela ukuba udilize ulwazi kwaye ubekhona nini ithemba likhangela isisombululo. Akwanelanga ukubhloga, nangona. Sityhala iindwendwe zethu ukuba zibhalisele ukutya kwethu, zibhalise ngencwadana, zisilandele kuTwitter, zisithande kuFacebook, okanye zidibanise nathi kwiLinkedIn ukuze sibe nethuba lokuba lapho xa sele bekulungele ukuthenga.
Ukuthengisa nge-imeyile yindawo elungileyo yokunxibelelana kwakhona nabo bathengi banokuthi 'bathenge' kungekudala. Mhlawumbi benza uphando kwi-intanethi, bakufumene ngeinjini yokukhangela, kwaye babhalisela ukuze bakwazi ukujonga kwaye banxibelelane xa sele bekulungele ukuthenga.
Iinethiwekhi zentlalo zizinto ezilungileyo kakhulu zokwakha igunya kunye nokuthembela, kunye nokuveza ubuntu bakho beshishini kumntu onokufuna ukwenza ishishini nawe. Kwakhona, ngokuqhubeka nokuhlala kufutshane nethemba lakho… uya kuba lapho xa bethatha isigqibo sokuthenga.
Ukuhambisa izithuba, ukuvuza iitweets, ukuvuza izimvo, kunye nokuhlaziya okuhlaziyiweyo akugcini ngokukugcina phezulu kwengqondo, ikwasuka kubantu abakwi-network yakho baye kubantu abakwiinethiwekhi zabalandeli bakho, kunye neenethiwekhi zabalandeli babo, njalo njalo.
Ukuba ngaphezulu kwengqondo kuthungelwano lwethemba lethu kubalulekile, ukwakha ukuthembana kunye negunya kwinethiwekhi yabo kuphucula amathuba ethu okusibiza xa sele bekulungele ukuthenga. Abantu ngamanye amaxesha bayabuza, kufuneka ndibeke izixhobo kuFacebook okanye kuTwitter? Ngaba kufuneka ndityala imali kwintengiso ye-imeyile okanye yokusebenza kweinjini yokukhangela? Ngaba kufuneka ndiqale ibhlog okanye ndibhengeze kwi-Intanethi?
Akukho mpendulo ichanekileyo kule nto. Umbuzo uxhomekeke kwimbuyekezo kutyalo-mali lwakho lwentengiso. Ukuba sithatha inxaxheba qho ngenyanga kwi-LinkedIn kangangeyure, masithi iyure ixabisa i-250 yeedola ngokubonisana… zii- $ 3,000 ngonyaka. Ukuba ndifumana ikhontrakthi eyi- $ 25,000 ekhokelwa yi-LinkedIn, bekufanelekile? Ewe kunjalo. Umbuzo awukho apho, umbuzo ngowokuba ungalinganisa njani kwaye usebenze kwimikhankaso yedriphu kuwo onke la maalam ngokufanelekileyo.
Musa ukubheja ngendlela enye, amathemba akho anokubakho naphina. Nje ukuba uchonge ezona ndlela zilungileyo zokuzonwabisa kunye nezona zikhokelo zithembisayo, unokubeka umgudu ngakumbi kula majoni.
Drip, drip, drip… kwaye ulinde ukuthenga.
tags: Ubuninzi bebhlog yeposikublogaUkuThengiswa kweMpahlakubloga kwequmrhuukuthontsizafrequencyukondla
Iiarhente: Yeka ukuNciphisa amandla akho ngeeNxibelelwano